पहुँचको भरमा ठेक्का लिंदै, अलपत्र पार्दै « Naya Page
पहुँचको भरमा ठेक्का लिंदै, अलपत्र पार्दै
जाजरकोट, १२ साउन । अनेक पहुँच र विधि प्रयोग गरेर ठेक्का लिने तर काम नगर्दा जाजरकोटको विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको छ । ठेक्का लिनेमा जनप्रतिनिधिदेखि पहुँचवाला राजनीतिक दलका व्यक्ति संलग्न हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो प्रगतिको लक्ष्य चुम्न मुस्किल परेको छ ।
पश्चिम जाजरकोटको शिवालय र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा विद्युत् पुर्‍याउने उद्देश्यले आव २०७५÷७६ मा खोलिएको ठेक्काको काम निर्माण व्यवसायी शान्तबहादुर बस्नेतले अहिलेसम्म नगर्दा समस्या भएको छ । मनघाटबाट सुवानाउलीसम्म पोल र तार तान्ने कामको ठेक्का उनले लिएका थिए । ठेक्का पाएको छ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने भनिए पनि दुई वर्षसम्म आधा काम पनि भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्र लेखिसकेको जाजरकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख विशाल लामिछानेले बताए ।
बस्नेतलाई सामग्री दिँदा पनि काम नगर्दा पश्चिम जाजरकोटमा विद्युतीकरण गर्ने कार्य अलपत्र पर्दै आएको छ । सामग्री लिएको तीन महिनाभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रमुख लामिछाने बताए । लामिछानेले भने, ‘काम गर्छु भन्नु हुन्छ तर गर्नु हुन्न, छेडागाड नगरपालिकाको थलहबजारसम्म पोल गाडेको छ तर त्यसभन्दा माथि काम नगरेर बीचमै अलपत्र परेको अवस्था छ ।’
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य तेजविक्रम शाहले (शाहीबाबा कन्स्ट्रक्शन) लिएको ठेक्काको काम पूरा नगर्दा पूर्वी जाजरकोटका बारेकोट र कुशे गाउँपालिकामा बिजुली बाल्न नसकिएको हो । उहाँले कुशेको पाँचकाटियाबाट कुशेसम्म जाने लाइन र नलगाड नगरपालिकाको कालिमटीबाट बारेकोट जाने लाइन निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । आव २०७५–७६ मा लिएको उक्त ठेक्का सम्झौतामा छ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने भनिएको थियो । काम गर्ने भन्दै ८०० भन्दा बढी पोलसमेत बुझिसकेका शाहले काम बीचमै छाड्दा सबै लथालिङ्ग भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
शाहले लिएका पोल नलगाड नगरपालिकाको रघुनाथलगायतका ठाउँमा सडकको माटो मुनि, खोल्सा मुनि र पहिराले पुरिएको अवस्थामा रहेका छन् । पटक–पटक कामका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेर बसेको प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।
पूर्वी क्षेत्रको अनुगमनमा जाँदा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका पोल देखाउँदै सदस्य सिंहले भने, ‘लाजलाई पनि लाज लागिसक्यो तर हाम्रा जनप्रतिनिधिले लिएको ठेक्कासमेत पूरा गर्दैनन् । काम नगर्नेले किन भएरनभएको ठेक्का लिनु ? यसरी कहाँ विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । यो त सरासर हामीलाई असफल गराउने काम भयो ।’
त्यस्तै प्रदेशले गरेको ठेक्काको कामसमेत प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । त्रिपुरेश्वरी जय दुर्गे जेभीले लिएको ठेक्काको काम कतै नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मटेलाबाट भर्‍याए जोड्ने लाइन काफलचौरसम्म लिएर अगाडिको काम लथालिङ्ग बनाएको छ ।
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको कालेगाउँ–रिम्नासम्म जोड्ने लाइन विस्तारको काम अलपत्र भएको छ । कालेगाउँबाट बहुनथाना पाँचकाटिया जोड्ने काम समेत बीचमै छाडिएको छ । यो पनि आव २०७५–७६ कै ठेक्का रहेको जाजरकोट वितरण केन्द्रले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमै नआएको बताएको छ ।
नलगाड नगरपालिकाको चिसापानीबाट प्रशासकीय केन्द्र दल्लीसम्मको काम पूरा भएको छ । त्यहाँ मिटर जोड्नेबित्तिकै विद्युत् बल्ने अवस्था रहेको विद्युत् प्राविधिकरणले जनाएको छ । आव २०७५–७६ मै ठेक्का लिएको रमन कन्स्ट्रक्शनले दल्लीबाट चौखासम्मको कामसमेत अहिलेसम्म पूरा गर्नसकेको छैन ।
पोल गाडे पनि तार तान्ने काम नभएकाले तुरुन्तै काम गर्न ताकेता गरिएको छ । सामग्री नहुँदा रोकिएको काम सामग्री दिएलगत्तै शुरु गर्न लागेको कार्यालयले जनाएको छ । चौखाबाट तल्लुसम्म पोल दिएर गाड्ने काम शुरु भएको छ । अगाडिको काम नभई पछाडिको काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले दुवै कामसँगै भइरहेको छ । आव २०७६–७७ को नयाँ ठेक्का न्यू बिके निर्माण सेवाले लिएको हो ।
कहाँ पुग्यो सबस्टेशन निर्माणको काम ?
जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएको चार वटा सबस्टेशनको काम चलिरहेको छ । नलगाड नगरपालिकाको चौखामा ठेक्का लागेर काम शुरु गर्न लागिएको छ । दुई वर्षभित्र सक्ने भन्दै सो ठेक्का गरिएको हो ।
त्यस्तै बडावन र समाइलामा निर्माण हुन लागेको सबस्टेशनको काम अहिले अध्ययन कार्य जारी छ । अध्ययन सकिए लगत्तै चार महिनाभित्र ठेक्का खोल्ने तयारी छ । क्षेत्रीय कार्यालयले चौखामा ठेक्का गरेको र केन्द्रीय कार्यालयले वडावन र समाइलामा ठेक्का गर्नेछ । गुदुमा सबस्टेशन निर्माण पूरा भई जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका केही भागमा बत्ती बलिरहेको छ ।
जिल्लामा अहिले तत्काल ११ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । भेरी नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका अधिकांश ठाउँमा केन्द्रीय लाइन (११ केभी) विस्तार भइसकेको छ । अन्य पालिकामा विद्युत् लाइन विस्तारका लागि गरिएका ठेक्काको काम निर्माण व्यवसायीले नगर्दा काम समयमै हुन नसकेका हुन् ।